कुखुरा, अण्डा र मासुको मूल्य ह्वात्तै वृद्धि - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com कुखुरा, अण्डा र मासुको मूल्य ह्वात्तै वृद्धि - खबर प्रवाह
कुखुरा, अण्डा र मासुको मूल्य ह्वात्तै वृद्धि
शनिबार, माघ १८, २०७६
भरतपुर । जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा र यसको मासुको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । एक महिनाको अवधिमा एक सय देखि १३० रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, अण्डा र चल्लाको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ह्याचरी उद्योगीले अघिल्लो महिना १० दिन चल्ला उत्पादन रोकेका थिए । यसरी अण्डा, चल्ला, मासु र जिउँदो कुखुराको मूल्य दैनिक बढ्नुमा ह्याचरी उद्योगीहरुको चलखेल रहेको पोल्ट्रीसँग आबद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
चल्लाको मूल्य बढ्यो
मंसिर महिनामा रू. १० मा चल्ला बिक्री गरिरहेका ह्याचरीहरुले अहिले अधिकतम ५५ रूपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन् । नेपाल ह्याचरी संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले क्रमशः बजार मूल्य सुधार हुँदै गएको बताए । ‘लागत ५५ रूपैयाँसम्म पर्छ’, उनले भने, ‘तर हामी जम्मा १०–१५ रूपैयाँमा बेच्न बाध्य भएका थियौँ ।’
मंसिरमा निकै कम रहेको चल्लाको मूल्य पुसमा सुधार भई २० रूपैयाँ पुगेको र पुसको अन्त्य तथा माघ महिनाबाट क्रमशः उकालो लाग्दै गएको उनले बताए ।
हप्तादिनमै ३० रूपैयाँ चल्लाको मूल्य बढेको छ । लागतभन्दा निकै कममा चल्ला बेच्न परेपछि धेरै व्यवसायी निराश भएको उनले बताए । अहिले नेपालमा हप्ताको ३५ लाख र चितवनमा मात्रै हप्ताको १५ लाख ब्रोइलर चल्ला उत्पादन हुने गरेको छ ।
जिउँदो कुखुरा र मासुको मूल्य बढ्यो
कुखुराको मासुको बजार मूल्य प्रतिकेजी ३५० रूपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । चिसो मौसममा कम कुखुरा उत्पादन हुने हुँदा बजारमा माग बढेसँगै मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, केहीले भने डेढ महिनाअघि गरिएको चल्ला नष्टको असरले किसानले खोरमा कुखुरा नहाल्दा कम उत्पादन भई मासुको मूल्य बढेको बताएका छन् ।
एक महिनाअघि जिउँदो कुखुराको मूल्य १३० रहेकोमा अहिले २४० सम्म पुगेको छ । त्यस्तै, मासुको मूल्य २४० रहेकोमा अहिले ३५० सम्म पुगेको अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल कुखुरा, अण्डा, दाना वितरक संघका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डेले बताए ।
चिसोको समयमा चल्ला र माउ कुखुराको पनि मृत्युदर उच्च हुने भएकाले कम उत्पादन भई जिउँदो कुखुरा र मासुको मूल्य स्वाभाविकरुपमा बढ्ने उनले बताए ।
अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ३३० रूपैयाँ पुगेको छ । डेढ महिनाअघि २७० र १५ दिनअघि तीन सयको हाराहारीमा अण्डा प्रतिक्रेटको मूल्य थियो । अहिले बढेर ३३० सम्म पुगेको छ । किसानले ३०५ रूपैयाँ प्रतिक्रेट पाउने गरी अण्डा संघले मूल्य निर्धारण गरेको छ । चिसो मौसममा अण्डा उत्पादन कम हुने भएकाले पनि बजारमा कम उपलब्ध हुँदा मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
ब्रोइलर कुखुराको दाना अहिले प्रतिकेजी ६६ रूपैयाँ पुगेको छ, जसले गर्दा अण्डा र कुखुरा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको नेपाल कुखुरा, अण्डा, दाना वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामराल भूषालले बताए ।
चिसोको मौसममा कम उत्पादन हुने भएकाले अहिले बजारको माग र आपूर्तिको नियमअनुसार मूल्यमा घटबढ भएको उनले बताए । दाना महँगो हुँदा अण्डा र कुखुराको मूल्य बढे पनि अझै किसानले नाफा लिन नसकेको भूषालको भनाइ छ ।
चितवनमा रंगशाला निर्माणार्थ भोलीदेखी धनधान्याचल महोत्सव, तयारी पुरा
नेकपा बैठकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन माग
शनिबारको दिन पिपलको पूजा गर्दा मिल्ने पाँच चामत्कारिक लाभ
“भर्खरै ब्यवसायमा पाईला चाल्दै गर्दा एउटी किशोरीको चिन्ता”
३दिदि बैनि ले कुचो स​मात्दा म​ भ​ने लुकिलुकी म​मिको शिलाई मेशिन​मा धागो छिराई र​हेको हुन्थें । ३केही ग​र्नु छ​ भ​ने बिदेश​ जानु प​र्छ​, त​र​ मेरो म​न​ले मानेन​ । ३व​र्त​मान​ अव​स्थामा नेपाल​का म​हान​ ब्य​ब​सायीक ह​स्तिह​लाई त​ टिक्न​ गारो प​रिर​हेको बेलामा म​हिला ब्य​ब​सायीको उप​स्थिती अत्य​न्तै न्युन​ छ​ । विज्ञापन ३न​ मैले बैकको सावा ब्याज​ चुक्ता ग​र्ने साम​र्थ्य​ […]
आईपे रेमिट र सेलपेबीच बिप्रेषण कारोबार सम्झौता
काठमाडौँ । आईपे रेमिट र सेल पेबीच बिप्रेषण कारोबार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच आईपे रेमिटका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक इन्द्रप्रसाद शर्मा र सेल पेका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधानले हस्ताक्षर गरे । अब सेलपे प्रयोगकर्ताहरुले डिजिटल माध्यमबाट आन्तरिक विप्रेषण गरी पठाएको रकम नेपालभर छरिएर रहेका ७ हजार ५ सय भन्दा बढी आईपे रेमिटका […]
आईपे रेमिट अब कृषि विकास बैंकबाट भुक्तानी हुने
काठमाडौँ । आईपे रेमिट अब कृषि विकास बैंकबाट भुक्तानी हुने भएको छ । आईपे रेमिट प्रालि र कृषि विकास बैँक लिबीच गत मंगलबार जेठ १३ गते विप्रेषण कारोबार भुक्तानी सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कृषि विकास बैँक लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायको उपस्थितीमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आईपे रेमिट प्रालिका तर्फबाट कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक […]
झन् महँगिदै सुन, तोलामा ८२ हजार नाघ्याे
काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा सुनको भाउ झन् महँगो हुँदै गएको छ । सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा १८ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ८२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आर्थिक मन्दीतिर गइरहेकाले लगानीकर्ता सुनतिर आकर्षित भएका हुन् । लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित हुँदा सुन […]
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेर्कड : तोलाको कति ?
काठमाडौ। नेपाली बजारमा सुनको मुल्यमा नयाँ रेर्कड कायम भएको छ। बुधबारको तुलनामा पुनः बिहीबार सुन प्रतितोला ५ सय रुपियाँले बढेर ७७ हजार ६०० मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महाँसघले जनाएको छ। यस्तै तेजावी सुनको मुल्य ७७ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मुल्य १० रुपैयाले बढेर प्रतितोला ९ सय १५ रुपैयामा कारोबार […]
आइतबार सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको भाउ आइतबार तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसअघि गएको पुस २३ गते सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि घटेर ७४ हजार रुपैयाँसम्म झरेको […]
ओली महान नेता हुन पार्टी फुटाउन कुनै जुम्राको सहारा लिनुपर्दैन : विष्णु रिमाल
ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुदै छाै, अब पार्टीमा बिद्राेह हुन्छ : नेता खनाल
कोरोना संक्रमित मन्त्रीले भेटेका थिए प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरीका आईजीपीसम्म
‘माओवादी भन्दा एमाले भ्रष्ट’ भन्दै युवा संघ स्याङ्जाका नेताहरु काँग्रेसमा प्रबेश गरे
केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट बनाउन सकिएनँ : माधव नेपाल
२४ घन्टामा कोरोना : विश्वमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित भारतमा, विश्वभर १ करोड २१ लाखबढी संक्रमणमुक्त
कोरोना संक्रमण समुदायबाट समूह समूहमा फैलिन थाल्याे
आज २०७७ साल साउन २२ गते बिहीबार : तपाइको राशिफल कस्तो छ हेर्नुहोस्